China 6m LED MOBILE TRUCK - Foton Aumark factory sy mpanamboatra | JCT
JCT 6m LED MOBILE TRUCK - Foton Aumark(Model: E-W3360)novaina amin'ny chassis Foton Aumark sy efijery fitehirizana angovo miloko ivelany feno. Ny vatan'ny kamio an'ny E-W3360 LED MOBILE TRUCK dia latsaky ny 6 metatra, afaka mahazo alalana sy mitondra fiara izy. Aorian'ny fisoratana anarana sy fahazoan-dàlana ny famolavolana chassis an'ny fiara kely dia afaka mivezivezy malalaka ao an-tanàna izy io raha tsy misy ny fiatraikany ratsy amin'ny fikatsoan'ny lalana sy ny fanakanan-dàlana. Jingchuan E-W3360 LED MOBILE TRUCK dia manana rafitra haino aman-jery haino aman-jery, manohana ny famerenana kapila U, ary manohana ny endrika horonantsary mahazatra. Nanjary terminal fanaovana doka izay afaka mihetsika malalaka, manova vaovao, paikadim-pifandraisana ary toerana amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny vokatra ary manintona ny mpanjifa. Izy io dia mpitatitra serasera dokam-barotra vaovao izay mampifangaro doka, famoahana vaovao ary fampitana mivantana. Safidy voalohany ho an'ny mpampiasa hampiroborobo izany.
Kely sy marefo kokoa, nefa tsy tsotra
Na dia noraisina aza ny chassis kamiao kely kely sy kely, 100% amin'ireo sehatra media no nolovaina tamin'ny kamio lehibe kokoa: 6.2m2 LED efijery feno loko, efijery mena mena tokana, boaty jiro mihodina, malefaka ary mety.
Ny fanatsarana ny asa dia miompana amin'ny olona
6m LED MOBILE TRUCK dia manana rafitra fanaraha-maso fanamafisana haino aman-jery vaovao izay mety kokoa amin'ny fikojakojana sy fandidiana; Varavarana misokatra roa sosona, tohatra azo ovaina ary endrika hafa noforonin'olombelona, ​​miampy ny firafitry ny fanatsarana ny rafitra elektrika, mahatonga azy io ho ara-dalàna sy azo antoka kokoa, mora ampiasaina.
Mamaky ny fifehezana, natokana ho an'ny tanàna
Aorian'ny fisoratana anarana sy fahazoan-dàlana ny famolavolana chassis an'ny fiara kely dia afaka mivezivezy malalaka ao an-tanàna izy io raha tsy misy ny fiatraikany ratsy amin'ny fikatsoan'ny lalana sy ny fanakanan-dàlana. Tena mahatsapa ny dokam-barotra miaraka aminy ary miditra amin'ny lafiny rehetra amin'ny tanàna.
Eu fenitra, fiarovana tontolo iainana karbonina ambany
Mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena, ny chassis kamiao izay mahafeno ny fenitra famoahana Euro Euro Euro / Euro is dia raisina miaraka, izay afaka mitsitsy angovo, mampihena ny famoahana ary mampihena ny fameperana ny tontolo iainana.
Parameter famaritana (fenitra)
1. Haben'ny ankapobeny: 5995 * 2190 * 3300mm
2. Ny efijery fampisehoana loko feno ivelany (P6) LED: 3520 * 1920mm
3. efijery fisehoana mena tokana an-kalamanjana (P10) habe: 3520 * 320mm
4. efijery fampirantiana mena an-kalamanjana tokana (P10) habe: 1280 * 1440mm
5. Fitaovana rafi-nomerika nomerika, afaka milalao sary dokambarotra 1-4 miorina amin'ny tadivavarana izy.
6. Fanjifana herinaratra (fanjifana antonony): 0,3 / m / H, fanjifana salanisa tanteraka.
7. Ampiasaina amin'ny rafitra fikirakirana horonantsary an-kalamanjana ho an'ny fandaharana mivantana na famoahana mivantana sy lalao baolina, misy fantsona 8, ary azo avadika araka ny sitra-pony ny efijery.
8. Ny herin'ny fotoana manan-tsaina amin'ny rafitra dia afaka manodina na miala amin'ny efijery LED.
9, manana rafitra haino aman-jery haino aman-jery multimedia, manohana ny famerenana kapila U, manohana endrika video mahazatra.
10. Ampiasaina miaraka amina generator milamina ultra-mangina, herinaratra 8KW.
11. Ny voltage input dia 220V, manomboka ankehitriny ny 25A.
E-W3360(6m LED MOBILE TRUCK-Foton Aumark)
Brand Fonton Aumark Lafiny ivelany 5995mm * 2190mm * 3300mm
Power Cummins Ny lanja tanteraka 4495KG
Fenitra Emission EuroⅤ / Euro Ⅵ Curb lanja 4250KG
Haben'ny efijery 3200 * 1920mm Dot Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Efijery fisotroana LED
Side hitarika ny haben'ny efijery 3200mm * 320mm Haingo namboarina namboarina aoriana 1280mm * 1440mm
Dot Pitch 10 mm ny famirapiratry ny mazava ≥5000cd / m²
Vata misy jiro
Haben'ny lamba 3100mm * 1500mm Roller Diameter 75 mm
Isan'nycylinders Varingarina 4-varingarin'i anaty rano
Salanisa fanjifana herinaratra
Monitor Tohano ny fidiran'ny famantarana 8-lalana
Mpilalao haino aman-jery miaraka amina karazana mpampitohy horonantsary mahazatra, azo ampiasaina amin'ny PC, fakan-tsary sns.
Manaraka: 6m LED MOBILE TRUCK-Nanjing YueJin
Nentina amidy kamiao finday, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday, Mobile Led Billboard kamiao, Led Mobile kamio, Led Mobile Trailer, Kamiaona finday taratra finday,